How to adding mac address in CPE repeater...? - MYSTERY ZILLION
Vote Up0Vote Down MinThaw August 2012 Posts: 1Registered Users အကိုတို ့ရေ CPE Repeater Mode မှာ MAC Address ထည် ့နည်းလေးသိချင်လို ့ပါ.......ကျွန်တော့် Network က.. CPE သုံးလုံး Bullet တစ်လုံး..ကို Balancing Router ခံထားပါတယ်..နောက်ထပ်CPE လေးလုံးကို Repeater ခံပြီး Range ချဲ ့ထားပါတယ်။အဲ့ Repeater တွေကို ချိတ် မဲ့ Client တွေ ကျ တော့ ဘယ်မှာ MAC ထဲ့ ရမလဲ မသိ လို့ ပါ......။balancing router နဲ့ ဆက်ထား တဲ့ CPE ၃ လုံး နဲ့ Bullet တစ်လုံး ကို ကျ တော့ balancing router ထဲ မှာ MAC ခံထား ပါ တယ်...။ကျွန်တော် သိ ချင် တာ က Repeater က ထက်လွှင့်တဲ့ Client တွေကျ တော့ အဲ့ repeater မှာ Mac ကို enable လုပ်ထား ရင် လဲ/ ချိတ် လို့ ရနေပါတယ်....။Internet line ထွက်နေပါတယ်....။အဲ့ ဒါကို Internet line မထွက်အောင် Mac ခံချင်ပါတယ်..။အဲ့ဒါ ဘယ်ထဲ မှာ Mac ထဲ့ ရမလဲ မသိလို့ ပါ....။balancing router ထဲ မှာ Mac ထဲ့ ရင် လဲ.....အဲ့ Router က repeater က Client အထိ Mac မချုပ် နိုင် ဘူး ထင်လို့ ပါ....။အဲ့ဒါ လေး သိချင်ပါတယ်...။	2 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down MinThaw August 2012 Posts: 1Registered Users ဘယ်သူမှလည်းပြောကြဘူးလား ဂျာ.. လုပ်ပါဦး…. မသိတာလား…မဖြေချင်တာလား ဟင်။ :(( Vote Up0Vote Down jazz5 August 2012 Posts: 18Registered Users MinThaw said:အကိုတို ့ရေ CPE Repeater Mode မှာ MAC Address ထည် ့နည်းလေးသိချင်လို ့ပါ.......ကျွန်တော့် Network က.. CPE သုံးလုံး Bullet တစ်လုံး..ကို Balancing Router ခံထားပါတယ်..နောက်ထပ်CPE လေးလုံးကို Repeater ခံပြီး Range ချဲ ့ထားပါတယ်။အဲ့ Repeater တွေကို ချိတ် မဲ့ Client တွေ ကျ တော့ ဘယ်မှာ MAC ထဲ့ ရမလဲ မသိ လို့ ပါ......။balancing router နဲ့ ဆက်ထား တဲ့ CPE ၃ လုံး နဲ့ Bullet တစ်လုံး ကို ကျ တော့ balancing router ထဲ မှာ MAC ခံထား ပါ တယ်...။ကျွန်တော် သိ ချင် တာ က Repeater က ထက်လွှင့်တဲ့ Client တွေကျ တော့ အဲ့ repeater မှာ Mac ကို enable လုပ်ထား ရင် လဲ/ ချိတ် လို့ ရနေပါတယ်....။Internet line ထွက်နေပါတယ်....။အဲ့ ဒါကို Internet line မထွက်အောင် Mac ခံချင်ပါတယ်..။အဲ့ဒါ ဘယ်ထဲ မှာ Mac ထဲ့ ရမလဲ မသိလို့ ပါ....။balancing router ထဲ မှာ Mac ထဲ့ ရင် လဲ.....အဲ့ Router က repeater က Client အထိ Mac မချုပ် နိုင် ဘူး ထင်လို့ ပါ....။အဲ့ဒါ လေး သိချင်ပါတယ်...။internet line ထွက်နေတယ်ဆိုတာ သိပ်မရှင်းဘူးဗျ wireless လွှင့်နေတာကိုပြောတာလား . ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက် မရပဲ local မှာပဲ file sharing လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလား .. cpe က wifi ထွက်နေတာကို တားချင်တယ်ဆိုရင်၊ cpe တစ်လုံးကို lan ကနေပဲ သုံးစေချင်တယ်ဆိုရင် wireless mode မှာ universal repeater နဲ့ မသုံးပဲ client မှာပဲ mac ထည့်ပီး စမ်းကြည့်ပါဦး။j@22	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
August 2012 MinThaw